Ciidamada Dowlada oo qaaday Duulaan ka dhan ah Al-Shabaab iyo Madaxweynaha oo ka hadlay Duulaankaasi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Dowlada oo qaaday Duulaan ka dhan ah Al-Shabaab iyo Madaxweynaha oo ka hadlay Duulaankaasi
MAREEG 1 April 2016
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo Xalay xalay ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho ayaa sheegay in Xalay Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo kuwa Midawga Afrika ee AMISOM ay qaadeen Dagaal ka dhan ah Al-shabaab,kaas oo lagu qaaday Qeyb badan oo ka mid ah Gobolada Dalka ee ay ku sugan yihiin Shabaab.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Howlgaladaasi uu bilowday uuna ka socdo meelo kala duwan waxii ka soo baxa Maanta lala wadaagi doono Warbaahinta, islamarkaana Dagaalka Al-shabaab uu socon doono ilaa laga soo Afjaro.
“Al-shabaab waa Cadawga Koowaad ee Ummadda Soomaaliyeed ma dhaafayaan Qof weyn iyo Qof yar midna,ma dhaafayaan Culimo iyo Hooyo Soomaaliyeed iyo Caruur intaba,waa in la iska qabtaa oo lala Dagaalamaa Dhamaan Ummadda Soomaaliyeed oo isku duuban”ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
“Dad Masaajid lagu Tukanayo Salaadii Alle Qarxiyay waxa laga sugayo waa Maxay,diin laawayaal aan Xishooneyn. Dowladda Soomaaliyana wey soo Afjari doontaa inta ka harsan Shabaab”ayuu hadalkiisa sii raacsaday Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaana uu tilmaamay madaxweynaha in ay rajeynayaan dagaaladaasi ay ku qaadeen ururka Al-shabaab ay ka guuleysan doonaan, waxa uuna xusay in Shacabka Soomaaliyeed ay maqli doonaan war ay ku farxaan.
Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in aysan qarin Al-shabaab, waxaana uu sidoo kale sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in aysan xabsiyada ugu daba tagin Al-shabaab.